Akụkọ kacha ọhụrụ gbasara FEC si Nigeria & ụwa | TAA
FIIRO na-achọ iwu gbasara ntụ ọka nke ntụ ọka na-etinye na confectioneries
INEC weputara usoro ihe omume maka ntuli aka ochichi nke Osun
Delta APC ndị isi na-agba ọsọ ka ndị amaghi ama
Gọọmenti Kogi iji mee ka 21 gbasaa ụlọ ọrụ ahụ ike
Ezekiel Bassey, bụ Ex-Barcelona, ​​na-agbakọta Akwa United
FEC kwadoro N68.6 ijeri ụzọ ọrụ
Onye isi oche nke Federal Executive (FEC) onyeisi oche nke President Muhammadu Buhari na-elekọta onyeisi ala na Wednesday kwadoro nchịkọta ego N68.6 maka ụzọ a na-ewu n'okporo ụzọ.
ECOWAS na-enwe mmetụta maka ndị ọrụ ugbo, ndị na-azụ anụ
Obodo 15 nke ECOWAS ga-agbakọta na Abuja na April 26 ka ha malite ịmalite ịkpachara anya n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ na mpaghara mpaghara.
Ntughari ntuli aka nke Donald Trump na-ebuli $ 28 nde
Onu ogugu ndi nhoputa ndi ochichi nke Donald Trump kpalitere $ 10 na nkeji iri na ise nke afo, na-eme ka o jiri ego $ 28 mee ihe n 'ego, nhoputa ya gosiri Sunday.
Ekiti guber: Minista Kayode Fayemi na-ede John Oyegun, ndị ọzọ na-enwe mmasị n'ọchịchị
Minista Mines na Steel, Kayode Fayemi, kwadoro onye isi nke Congress All Progressives Congress (APC) na ndị gọọmenti họpụtara n'elu ikpo okwu nke nnọkọ nke nzube ya iji kwado nhoputa ọchịchị gọọmentị July 14 na Ekiti.
FEC kwadoro N13 ijeri maka Warri-Escravos ọdụ ụgbọ mmiri
Nzuko Executive Council (FEC) nke isi oche nke Vice Vice President Yemi Osinbajo kwadoro na ọ bụ ụgbọ mmiri Warri-Escravos maka N13.
Onye isi oche Osinbajo na-elekọta nzukọ FEC
Onye isi oche Yemi Osinbajo, na Wednesday, na-elekọta ndị isi obodo ahụ (FEC) dịka ndịọrụ na-ahụ maka ozi na ọdịbendị na ndị inyom na-ahụ maka nnọchiteanya nke ụmụ nwanyị na-emechi ihe ha mere kemgbe ọnwa Nov.NNNX ruo taa.
Gọọmentị Federal kwadoro nkwụghachi $ 322.51 nde Abacha loot si Switzerland
Gọọmenti Gọọmentị kwuru na ọ natala ego dolla 322.51 si n'aka Gọọmentị Switzerland dịka akụkụ nke ego a gbaghaara ego site n'aka onye isi obodo, ụnyaahụ General Sani Abacha.
Kemi Adeosun: Enweghị esemokwu na mgbake $ 322.5 nde Abacha
Gọọmentị Federal na Tuesday kwuru na ọ dịghị esemokwu gbara gburugburu US $ 322,515,931.83 nke oge ochie General Sani Abacha.
Garba Shehu: Onye isi ochichi Buhari kwadoro ihe ruru nde $ 1 maka ngwá agha ọ bụghị ikpeazụ
Onye isi ndi isi nke ndi isi na ndi isi mgbasa ozi, Garba Shehu, kwuputara na nkwado nke $ 1 site n'aka onye isi ya maka izuta ngwá agha iji luso agha agha Boko Haram abụghị nke ikpeazụ.
Minista: Nigeria Airways 'ex-workers'll ga enweta N45 ijeri severance mgbe Ista
A ga-akwụ ụgwọ N45bn na-akwụ ụgwọ nke ndị ọrụ mbụ nke njedebe Nigeria Airways Limited mgbe ezumike Ista gasịrị ozugbo Senate amaliteghachi ma kwado ego ahụ, Gọọmentị Federal kwuru.
Onye na-eme egwuregwu na-emechu anya na ihe efu nke 0-2 na Super Eagles na Serbia
Minister of Sports, Solomon Dalong, kwuru na Wednesday na ọchịchị Gọọmenti etiti adịghị enwe mmechuihu na ọnwụ 0-2 na Serbia na mba ụwa na-eme enyi na-eme na Tuesday.
Nigeria, ECOWAS na ajụjụ Morocco
Anọ m na Morocco n'oge na-adịbeghị anya, banyere 20 afọ mgbe m rụsịrị Timbuktu, Marrakech, Casablanca, Rabat na Laayoune. Enwere m mmasị nke ukwuu ịhụ ka Morocco na obodo ya ndị na-agba chaa chaa nọgidere bụrụ nke a haziri ahazi, nke ọma na mba dị egwu.
President Buhari ama aka na nkwekorita okpukpu abụọ na Singapore
President Muhammadu Buhari na Monday abanyela nkwekọrịta abụọ na mba abụọ na-akwado nkwado nke Executive Council (FEC).
Minista: Teknụzụ akpụkpọ anụ ga-akwalite ngwaahịa ụmụ amaala na Nigeria
Minista sayensị na teknụzụ, Dr Ogbonnaya Onu, kwuru na Monday na ndokwa maka usoro nkwalite nke nkà na ụzụ akpụkpọ anụ ga-eme ka nchịkọta nke nkà na ụzụ nke ụmụ amaala chọrọ na Nigeria.
Ndi oru ugbo agha na egbu egwu Naijiria
Ndị ọrụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu ekwuola na ha ga-emechi ụgbọelu ma kwupụta ihe ọ bụla ụgbọ elu na-eme iji mee mkpesa megide Federal Government jụrụ ịkwụ ụgwọ N45b pension na gratuities nke Nigeria Airways ex-workers.
Ndi otu ndi mmadu na-eyi egwu imegide ugwo ugbua nke umuaka ndi Naijiria
Ugbo ato n'ile oru ugbo ala nyere umuaka 14 ka ha nye ndi Gomenti Gomenti ugwo ugwo ugwo oru nke ndi 6,000 na ndi Naijiria.
123...11Page 1 nke 11
Ụlọ ọrụ Federal Institute of Industrial Research, Oshodi, (FIIRO) na Thursday kpọrọ iwu maka ntụ ọka ntụ ọka na-etinye na ọka wit maka nri na ihe oriri.
Ụlọrụ Nọọmenti Independent National Electoral Commission na Osun wepụtara oge usoro maka nchịkwa nke nchịkwa gọọmentị nke September 22.
Ndi mmadu ekwuwo na ha gbara otu n'ime ndi isi oche ndi ochichi nke Delta State chapter of the All Progressives Congress, Pastor Silas Buowe, na afo.
Gọọmentị Gọọmenti Kogi ekwuola na nke ọ bụla n'ime mpaghara ochichi obodo nke 21 ga-enweta otu ụlọ ọgwụ ahụike.
Joao Lourenco nke Angola choro ka e nwee nkwalite ochichi onye kwuo uche ya na Southern Africa
President Joao Lourenco nke Angola na Tuesday kwuru ka a gbasaa na nwelite nke ọchịchị onye kwuo uche ya na nnwere onwe dị iche iche nke ebe ndịda Afrika dị, iji hụ na akụkụ niile nke ọha mmadụ na-etinye aka n'ịmepụta mpaghara mpaghara ahụ.
Onyinye Donald na-ekele Kim Jong-un dị North Korea, 'dị nnọọ nsọpụrụ'
Onye isi US President Donald na-ekwu na Tuesday, onye Korea North Korea, bụ Kim Jong Un dịka "dị nnọọ njikere" na "dị nnọọ nsọpụrụ," na-ekwu na Pyongyang nọ na-enwe nzukọ "n'oge na-adịghị anya."
Ex-Gọvanọ Duke gbaghachitere ya na ex-minista Okonjo-Iweala maka ihe ndị gbara ya n'akwụkwọ
Otu onye isi gọvanọ nke Cross River State, Donald Duke, agbaghala azụ n'oge bụbu Minista ego, Ngozi Okonjo-Iweala, na ekwu na ọ gbalịrị igbochi ya ịbanye na ochichi Goodluck Jonathan iji kweta ọchịchị gọọmenti Jonatan, "adịghị ike ma ghara ịga nke ọma ".
Pep Guardiola: John nkume ga-adị mma maka iko ụwa
Onye na-agbachitere England John Stones ga-adaba na Cup World na Russia n'oge okpomọkụ a, dị ka onye isi obodo Manchester Pep Guardiola si kwuo.